के तपाइलाई थाहा छ ? कम्प्युटरकाे ‘किबोर्ड’ का अक्षर किन क्रमानुसार हुँदैनन् ? onlinedarpan.com
Friday 21st of January 2022 / 02:26:15 PM
के तपाइलाई थाहा छ ? कम्प्युटरकाे ‘किबोर्ड’ का अक्षर किन क्रमानुसार हुँदैनन् ?
कम्प्यूटरको आविस्कार १९ औं शताब्दीमा चाल्र्स बेबेज नामक एकजना प्रख्यात गणितका प्रोफेसरले गरेका थिए । त्यसैले उनलाई कम्प्युटरको पिता पनि भनिन्छ ।
त्यो समयदेखि अहिलेसम्म कम्प्युटरमा कैयन परिवर्तन भएका छन् । हाम्रा औंला जति छिटो किबोर्डमा घुम्छन्, त्यति नै छिटो संसारमा सूचनाको आदान प्रदान पनि हुने गर्दछ ।
तर तपाईले कहिले किबोर्ड चलाउँदा यसका अक्षरहरुबारे सोच्नु भएको छ ? अंग्रेजी या नेपालीका यी अक्षरहरु क्रम अनुसार राखिएका हुँदैनन् । यस्तो किन भएको होला ?
के रहेछ त इतिहास ?
कीबोर्डको प्रयोग हामीले घर या कार्यालय या मोबाईल जहाँ भएपनि हरेक दिन गर्ने गर्दछौं । कीबोर्ड र मोबाइलको कीप्याडमा शुरुआती अक्षर QWERT (क्वार्टी) रहेका हुन्छन् । क्रिष्टोफर शाल्सले क्वार्टीको रुपरेखा तयार गरेका थिए । सबैभन्दा पहिला वर्ष १८७४ मा आएको टाइपराइटरमा शब्दको प्रयोग यसरी नै भइरहेको थियो । त्यो बेला यसलाई रेमंगटन को नामबाट चिनिन्थ्यो ।
शाल्सले शब्दको पद्धती र क्रमको निर्धारण गर्दा क्रमानुसार गर्दा बटनहरु जाम भएको पाए । एकपछि अर्को गरेर अक्षर हुँदा कीबोर्ड दबाउन अप्ठ्यारो परिरहेको थियो । त्यतिबेला टाइपराइटरमा ब्याकस्पेसको बटन हुँदैनथ्यो । त्यसैले कीबोर्डमा क्वार्टी QWERT शब्दको प्रयोग गरियो । ताकि टाइप गर्न सजिलो होस् ।
एदेखि जेडसम्म क्रमानुसार राख्दा अक्षर अल्झिने र की थिच्न समस्या देखियो । त्यसपछि उनले अ्रग्रेजीका भोइल र कन्सोनेन्टहरुलाई एउटा गतिमा ल्याउनका लागि निकै मेहनतपछि QWERT (क्वार्टी)को आविस्कार गरे ।